Ms. Fatiha Serour oo ka hadashay wadahallada Al shabaab iyo dowladda Soomaaliya – Somali Top News
Ms. Fatiha Serour oo ka hadashay wadahallada Al shabaab iyo dowladda Soomaaliya
April 27, 2019 Somali Top News	0 Comments
Dr. Faatixa Suruur, oo ahayd ku-xigeenkii xog-hayaha guud ee Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ayaa sheegtay in Qaramada Midoobe aysan sharixi karin Fikirka Al-Shabaab ee ay kaga qayb qaadan karaan dhismaha nabadda.
Waxa ay intaa ku dartay in Al-Shabaab ay wataan fikir gaar u ah oo ay adagtahay in laga dhaadhiciyo in miiska wada hadalka wax waliba ay geeyaan oo lagu dhameeyo, si loo dhiso nabadda.
Faatixa suruur ayaa tusaale usoo qaadatay kooxda Daalibaan ee ka dagaalanka Afgaanistaan oo ay sheegtay in wada hadal lala furay.
Dhibaatada Qaramada Midoobe ka heysata dhismaha nabadda Soomaaliya waxa ay ku sheegtay in Al-Shabaab aanu ogoleen in wada hadal ay abuuraan.
Aragtidooda ayay sheegtay in ay dadka usii gudbiyeen, si ay usii joogaan mudo dheerna ay usii shaqeyso aragtidooda.
“waxaan ku dhahay,waynu dhisi karnaa Nabada,hadii aanay isku dayno in la xaajoono kuwa masuulka ka ah dhibaatada,Dhab ahaantii waa sida xaalada afgaanista iyo taalibaan.Tobon sano kadib maanta wada hadal ayay ogol yihiin waana lala bilaabay,Wan ku wareeray kuwa aan la laheyn Darajo sare hadana aadaya xaafadaha sida ay ula kulmaan wakiilada alshabaab,Waxaa jira qaar aragtideyda ah oo ku aadan arinta.
Ms. Fatiha Serour ayaa sidoo kale sheegtay iney jiraan dad faqiir ah kuwaas oo ayaga ku biira Al shabaab in ay cuno u siiyeen, waxeyn sheegtay in aysan suuragal in wadahadallo nabadeed lala furo iyagoo dhaqaale ka helay shirkado waa weyn iyo ganacsiyada kala duwan ee Soomaaliya.
← Ilhan Cumar oo sheegtay iney wax ka qabaneyso duqeymaha Mareykanka uu ka fuliyo Soomaaliya
Ciidamada amniga oo gacanta ku dhigay Miinooyin ay aaseen Al shabaab →
Aqalka sare oo soo bandhigay cabashooyinka ay qabaan Dowlad goboleedyada dalka
November 27, 2018 Somali Top News 0
Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida oo xukun dil ah ku fulisay dhagar qabe dilay wadaad caan ahaa
December 29, 2018 Somali Top News 0
Fadhigii golaha wakiilada Somaliland oo lagu kala kacay
August 6, 2019 Somali Top News 0